Madaxweyne Geelle Oo Qaabilay Madaxweyne Saylici Iyo Waftigiisa.. « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Madaxweyne Geelle Oo Qaabilay Madaxweyne Saylici Iyo Waftigiisa..
Madaxweyne Geelle Oo Qaabilay Madaxweyne Saylici Iyo Waftigiisa.. By hiildan on June 4, 2012	• ( 25 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Hogaamiye kooxeed somaliyeed, Gaar ahaan kan Hargeysa… Somali qaldan..!!!!!O G A Y S I I S * H I I L Q A R A N: Munaasibad Ka Dhici Doonta Ottawa 23 June (Up-dated 08/06/12) »Categories: Warka (News)	Related Articles
Mr. Siilaanyo Thank You and Congratulations but Never Surrender Our Sovereignty	Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	Professor Axmad Ismaaciil Samatar: CANARY IN THE COAL MINE (Somalia)	25 replies	»
Saadudiin	June 4, 2012 • 11:10	Bienvenu saylici a djibouti waxaad dhextimid ahligaagi
Reply ↓	Haboon	June 4, 2012 • 11:33	War kan oo kale waa Jamais Vu.
Haday adeecadii jabuuti iska diiday inay tidhaah Mudane Saylici, anagaa kun Jeer ku leh Mudane Saylici, Masha Alaah,
Alaah ha ku daayo…amiiin
Reply ↓	hiildan	June 4, 2012 • 12:08	Haboon nabad badan, badan nabad, waa laba eray oo isu eg marka dhan kasta laga akhriyo. Sidaa daraadeed waxan kugu salaamayaa Nabad Badan.
Intaa ka sokow,
Horta aniga uunbaa u fiirsaday iyadoo TV-ga Djibouti aanu ku darayn naanaysta ‘Saylici’… Haddii idinkuna ad ila aragteen, dee fiiradaydu ma xuma.
Balse waxan kala garan laahay, ma sharciga Jabuuti u yaalla ayaa dhigaya inaan madaxda qaranka loogu yeedhin naanaysahooda mise waa mid kaliya ay la damceen Saylici?. Toloow markii uu tagay Siilaanyo, miyay ku dareen naanaystiisa mise way ka rabeen? Anyway Su’aalahaas jawaabtooda waxan u dhaafayaa wiilasha Ciise ee Durgiye iyo Sahal.
Reply ↓	hiildan	June 4, 2012 • 12:15	SIILAANYO, way ku dareen naanaystiisa, SAYLICI sasmay ka qaadeen…kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	Aar Harawa	June 4, 2012 • 12:48	Salaan ka dib,booqashadu waa caadi, waxase cad waxa loogu yeedhi waayay Saylici, Salylac Ciisaa leh weeyaan ee nin Samaroon ahi ma sheegan karo, murtidu waa taa ee hildanow kor u qaad garaadka.
Reply ↓	kuluc	June 4, 2012 • 12:57	hiildan
waxa laga yaabaa waa markii ugu horaysay ee gabadha weriyaha ahi ay barato magaca madaxweyne ku xigeenka somaliland, hadii qof magaciisa maanta laguu dhiibao waxa kugu dhiba isagoo sadaxan inaad akhriso iska dhaaf inaad macaal naanaysta u raaacisee.
ma ogtahay in inta badan bulshada bariga somaliland ay madaxweyne kux xigeenka SAYLICI oo keliya u yaqaaniin qaar badan ayaanba qaban magacyada rasmiga ah ee madaxweyne ku xigeenka,
Reply ↓	hiildan	June 4, 2012 • 13:16	Aar,
Sxb , damaca ciise iyo damanaanta Samaroon waa soo jireen, waa laga yaabaa in magacii Jaamac Saylici meesha laga dhex arkay, odaygaas oo ciisuhu xitaa magaciisa ka tirtireen taariikhda Djibouti. Sidoo kalana way dhici kartaa in Saylac laftrkeeda looga dan leeyahay. Sidaa iyo si la mid ahna waabay dhici kartaa inay iska tahay dhacacdo iska sahlan oo iska timid. Balse aynu eegno aayaha
War jiraaba cakaara… waynu sugaynaa wariyayaasha kale iyo warsidayaasha Djibouti wixii ku qornaa. Siday ila tahay qof kasta oo Soomaali ah, way u fudadahay inuu carrabkiisu yidhaahdo ‘Saylici’, oo aanu hilmaami karin ilaawina karin.
Reply ↓	Aar Harawa	June 4, 2012 • 14:46	WAA RUNTAA hIILDAN, BAL WAXAAD KA WARDOONTAA DAD WEYNAHA JABUUTI WAXA AY ISLA DHEXMARAYAAN EE BOOQASHADA SAYLICI, MARKA LAGA TAGO, RASMIGA.
Reply ↓	hoodo	June 4, 2012 • 16:55	hiidan
waa ku salaamay
madaxwene saylici marka aad tidhaa waa habaar oo waxaad habaaraysay madaxwene siilaanyo kkkkkkkkk
waxaad ku riyoonaysaa in uu siilaanyo maro halkii cigaal maray allay raxma
riyadaada allaha aqbalo
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 4, 2012 • 16:56	Modane Saylici waxaa loogu yeedhay magacdi aabihi iyo awoowgi iyo kisiiba ee ilaahay iskugu yeedha yidhi waxaana lagu soo dhaweeyey dal u safar qarsoodi ah ku soo gali lahaa waayo dalka u sheegan pasporkiisu kama duwanaa warqad journal oo faraha lagu masaxdo, maanta wixii ka dambeeyana waxaa loogu balaan qaaday in pasporka Hargeysa lowyacade lagu visayn doono waana guul u rayaale iyo mid ka horeeyayba gaadhin oo laala eexday laakiin rag aan ogaa abaal loo gala iska ba,y.
teeda kale warkii RTD ee warkan ka horreeyey hadaad dawaateen isla gabadhan ayaa akhrinaysay saylicina waxay ku sheegtay raysal wasaarah dalka somalia kkkkkk Djiboutina waligeed lagama isticmaalin dawlad ama jamhuuriyadda somaliland wariyuhuna kalmada uma barayn mana raban sida aano kale in ay bartaan.
Reply ↓	SAHAL	June 4, 2012 • 20:01	Dhacdo kasta inigu ma’ dhinaca negativ ka uunbaad ka joogsanay kkkkkkkkkk Allxamdullilah intood tidhaahdiin miyaanad mahad ka celinayn sooryaynta iyo soo dhawaynta.
Saylac hadduu Gadabuursi leeyahayna dee uguma aad yeedheen mid midkii magaaladaa qadiimiga iniga tegay. Bal car waa kaase na tuse nin Gadabuursi oo BOORAMAAWI la yidhaahdo kkkkkkkk
Maxadse odaygan ugu diideen jagada uu hayo ee madax-weyne ku xigeenimo oo aad Madax-weyne ugu sheegaysaan ma’ in hadhoow Siilaanyo xidhaad rabtiin?
SAYLICI SAYLICI SAYLICI SAYLICI soow intaa uun maaha waxad Ciise ka tabanaysiin caawa bari Allay ku taalaaye dee waa kaase qabooba oo nafisa kkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	hiildan	June 4, 2012 • 21:14	Sahal, abti way jiraan gadabuursi badan oo la yidhaahdo Abdi Boorama, xasan borama, Booramaawi, iwm. Dad badan oo la yidhaahdo berberaawi oo reer berbera ah, kuwo kale oo la yidhaahdo Hargeysaawi, Burco..iwm oo intuba u dhashay isla magaaloyinkaa loogu magac daray.
Bal Abti warka ii balballaadhi, saxaafada jabuuti ma lagu soo qoray ‘Saylici’..?.. Mise laguma soo qorin?
Saylici marka la joogo Hargeysa, waxa loogu yeedhaa Madaxweyne Saylici, waa ‘protocol’ caadi ah, ceeb iyo habaar toona ma aha.
Reply ↓	godan	June 4, 2012 • 23:56	Xarumihii boqor Cismaan Maxamuud,ras casayr.
Reply ↓	godan	June 5, 2012 • 00:04	Waan maqli jirey Bareeda iyo Baargaal,Ilaahay dhulka ugu quruxda badan ayu inagu beeray laakiin nimco waliba nusqaan dad ayan jirin.
Reply ↓	godan	June 5, 2012 • 01:02	Caasho Cabdow [Malayka.
Reply ↓	godan	June 5, 2012 • 01:19	Markaad iga maqnatide
Mugdi i meel xunan maraye
Maalin walban ku imade
Miriqdadi ma arke
Mudo badan ku mermere
Waa i maanqadaye
Ha i moodine
Iga soo mar meehid ogayde
Markad iga maqnatide aaah mugdi i meel xunan maraye
Aaah markad iga maqnatide Aaaah mugdi iyo mel xunan maraye.
Waa hees waayo waayo laga daari jiray biibitoyinkii xaafada.
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 5, 2012 • 07:32	Mohamed Soomaali wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka badda ee Djibouti ayaa isna meesha igaa muuqda,marka waxaa igu soo booday fikir ah maxaa keenay goobta lagu qaamilay madaxweyne suge ahaa Saylici?
Mohamed Soomaali hadduu doonaya in u saylici tolnimo iyo reeraysi ku soo dhaweeyo muxuu ugu samayn waayay guurisay PRIVATKA u ah qada reer toleed?
Hiildanoow timihiinu hor iyo dib mid uun ha feedhmaan hadaad tihin reerkan yar ee isla booday sanadkan 2012-ka.
Reply ↓	hiildan	June 5, 2012 • 12:13	Cali Durgiye ma wuxu noqday Cali Duul-duul?, soowkan kolba meel u duulaya.? Waar ninku ma tuug la qabtaybuu noqday, waa sidee xaalkiisu?….!!
Sxb bal nooga soo jawaab maxay naanaysta Saylici ugu noqotay luqmatul xaja TV-ga Djibouti.?
Masuuliyiinta soo dhaweeyay Saylici waxay isugu jireen ciise iyo cusbayahan intaba. Isaguba wuxu watay wufuud badan, isna waxa lagu qaabilay wufuud badan. Xaashi iyo Maxamad Soomaali, kuwaas ayuunbay ka mid yihiin. The problem is, ninka la yidhaahdo maxamad soomaali, anuu xitaa muuqiisa wali ma garanayo..!
Reply ↓	Haboon	June 5, 2012 • 15:00	Hiildan sideed u garan wayday seedigaa kolna inaadeerkaa, Mohamed Somali waa ninka Dileyta iyo Tani u dhaxeeya, Ina Durkiye Mohamed Somali maaha sida Xaashi, maaha nin meel walba gala, waa nin shaqo… xaga horumarka wadanka waa gacanta midig ee IOG laakiin aan dheef ku qabin…
Reply ↓	Haboon	June 5, 2012 • 15:13	Wuxuu ka jira safka hore dadka la yidhaa…Daacadi Ninkeegi Dishaye Daawo Gadabuursi…
Reply ↓	Ali-Durgiye	June 5, 2012 • 15:34	Haboon,
ukhti odaygan Hiil iyo hooba yara waxaan rabay in aan dhulka ku jiido ee secourtka igaa jooji, odeygu wabaa waa faantar riyaha iyo jiriqaaga Boon iyo Boorama u kala yaqaan iska da Mahad case gadabuursiga Djibouti iyo canfartuna waa iskugu mid waabad, aragtaa Dilayte iyo Mohamed soomaali xaashi afweyne midna buugantiisa kuma qorno
Reply ↓	Haboon	June 5, 2012 • 15:45	ok ali raali ahow, laakin bas waxaan rabay adiga su’aashada inaan yara iftimiyo X iyo MS…igama ahayn HiilDan u hiili…
Reply ↓	Xunshalay	June 5, 2012 • 21:34	Aad ban u salamaya madaxwayne ismail
Reply ↓	godan	June 5, 2012 • 22:24	Salaan sare mudane Saylici……….
Reply ↓	Aw-barre	June 6, 2012 • 10:26	Saylici si fican ayu hawasha u wada woxoga cadadiso saranmoye
Blog Stats	1,205,925 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)